"Magnit" wuxuu u abuuray mashiin elektaroonig ah qalab casri ah alaab-qeybiyeyaasha - Nidaamka Baradhada
Sida laga soo xigtay goobta RETAIL.RU, shirkaddu waxay u furtay madal alaab-qeybiye alaab-qeybiye ah oo loogu talagalay ganacsigeeda 16-ka ah ee cuntada. Boggu wuxuu ka kooban yahay in ka badan 100 xuduudaha lagama maarmaanka u ah sameynta go'aanka wax iibsiga, wuxuu si madaxbannaan u barbardhigayaa dalabyada isku mar dhowr tilmaamayaal wuxuuna doortaa barkad kuwa ugu fiican.
Koox khubaro ah oo ka socda "Magnit" jihada wax soo saarkooda ayaa soo saaray xal warshadeed SRM (Nidaamka Xiriirka Bixinta) si ay uga ururiyaan soo-jeedinta alaab-qeybiyeyaasha shirkadooda. Nidaam elektaroonig ah oo mideysan ayaa kuu oggolaanaya inaad si dabacsan u maamusho isdhexgalka lamaanayaasha, ballaariyo tirada dhiggooda isla markaana yareeyso waqtiga si aad u hesho xulashooyinka ugu fiican.
Bil kasta, xarumaha Magnit ee u gaarka ah raashinka iyo wax soo saarka beeraha-warshadaha, oo ku yaalo gobolada kala duwan ee dalka, waxay iibsadaan qiyaastii 10-15 kun tan oo ah alaab ceeriin ah, oo ay ku jiraan in ka badan 500 oo shey. Horumarinta ganacsigeenna, koritaanka waxsoosaarka wax soosaarka iyo ballaadhinta noocyadu waxay u baahdeen hanaan midaysan oo wax soo iibsi oo leh adeeg heer sare ah.
Marxaladda koowaad, madal otomaatig ah ayaa loo heli karaa sagaal shirkadood oo Magnit ah, oo ay ku jiraan Krasnodar Industrial Park. Hadda dhammaan dhinacyada farsamada waa laga shaqeynayaa, sidaas darteed, marxaladda ugu horreysa, kaliya shuraakooyinka waaweyn ayaa ku xiran nidaamka. Mustaqbalka, barxadda ayaa loo isticmaali karaa qof walba, oo lafteeda ayaa loo qiyaasi doonaa dhammaan warshadaha kala duwan.
Tags: "Magnet"madal smart
Gobolka Sverdlovsk: Abaartii Julaay waxay horseedday hoos u dhac ku yimid mugga soo goynta baradhada
Shirka Ururka baradhada ee bandhigga "Dayrta Dahabka": tilmaamaha ku xirnaanta daawashada
AGROSALON 2020: tirooyinka muhiimka ah
Ku rakibida TOMRA 3A waxay ka caawisaa soo saaraha Baradha tayo sare leh Kordhinta wax soosaarka iyo waxtarka
Shirkadda "Agoosto" waxay ballaarineysaa soo saarkeeda abuur